news Archives - iftineducation.com
aadan21 / July 11, 2017
Dowlada Austria ayaa shaaca ka qaaday in dalkeeda ay ka mamnuucday Xubin ka tirsan Golaha Wasiirada dowlada Turkiga. War qoraala oo kasoo baxay Wasaarada arrimaha dibadda Austria ayaa waxaa dalka looga mamnuucay Wasiirka dhaqaalaha Turkiga Mr Nihat Zeybekci. Wasiir Nihat Zeybekci, ayaa amarkaasi la duldhigay kadib markii dowlada Austria ay ka warheshay in Wasiirka uu kusoo fool leeyahay dalkeeda. Wasiirka…
Sida uu baahiyay Sargaal ka tirsan Madaxtooyada Turkiga oo lagu magacaabo Kheybar Dayib, waxaa socda baaritaano hor leh oo lagu xaqiijinaayo xiriirka ay dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka la leeyihiin argagixisada Somalia ee Shabaab. Sargaalkani ayaa sheegay in dowlada Turkiga ay garab istaagan tahay dowlada Qadar oo iminka wada baaritaano kaabi kara macluumaad hordhac ah oo ku aadan xiriirka Sacuudiga iyo…
Warar ay baahiyeen Wargeysyada mucaaradka Turkiga ayaa sheegaya in dowlada Turkiga ay Hub iyo Gaadiid dagaal u daad gureyneyso dalka Qadar. Hubka iyo Gaadiidka ayaa la sheegay inay saanad Militery u tahay ciidamada Turkiga ee dhawaan la geeyay dalka Qadar. Wargeysyada ayaa sheegay in qeybo kamid ah Hubka iyo Gaadiidka loogu deeqay Qadar, si ay isaga difaacdo duulaanka suuragalka ah…
Iyadoo Wasiirka arimaha dibadda Qatar uu shaaca ka qaaday in dowladiisa ay ka biya diiday fulinta shuruudaha kasoo baxay dowladaha isbaheysiga Khaliijka, ayaa waxaa hadana soo kordhaaya macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sababta ay Qadar u diiday Shuruudaha. Max’ed Bin C/raxmaan Al-Taani oo ah Wasiirka arimaha dibadda Qatar, ayaa sheegay in dowladiisa aysan ku qanci doonin qodobada ay isla…
Qaraxyada ay ururka Al Shabaab ka gaystaan gudaha dalka Soomaaliya iyo Kenya ayaa la ogaaday inay u adeegsadaan hubka ay ka furtaan ciidamada Amisom, xilliyada ay weeraraan Saldhigyada ay ku sugan yihiin ciidamadaasi. Warbixin laga soo saaray Baaritaan ay sameeyeen Saraakiil reer Galbeed ah ayaa lagu xaqiijiyay in badi aaladaha qaraxyadaasi ay ka sameeyaan Shabaabka ay yihiin bambooyinka kala duwan…
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa shir guddoomiyey kulanka ay yeesheen guddiga amniga Badaha, kaas oo looga hadlayay arrimo la xiriira badaha. Qodobada la iskugu soo qaaday kulankaan ayaa waxaa ka mid ah in qorshaha sugida amniga badda la hoos geeyo wasaaradda amniga, halkii markii hore hoos imaan jirtay wasaaradda gaashaandhiga.Wasiirada ka qeybgalay kulankaan ayaa…
Madaxa Sanduuqa Lacagta Adduunka Samba Thiam ayaa sheegay in lacagtan cusub ay suuqa soo gali doonto Sanadkan 2017 inta uusan dhamaan, waxaana meesha ka bixi doonta lacagta duugta ah ama been abuurka ah ee hadda suuqyada Soomaaliya ku jirta . Waxa uu intaa ku daray in 89% lacagta hadda Soomaaliya laga isticmaalo ay been abuur tahay tirada soo hartay ee…
aadan21 / June 26, 2017
Su’aasha #7aad:-Nooga Sheekee Taariikh Nololeedkaada iyo Bilowgii Noloshaada? Jawaabta #7aad:- Magaceygu waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo , waxaan ku dhashay Muqdisho Sanadkii 1955 gaar ahaan Xaafadda Iskuraran oo ku taallay halka hadda loo yaqaanno “ Beerta Nabadda”. Aabahey waxa uu yimid Caasimadda xilligii Gumeystaha Talyaaniga, waxaan wax ku bartay Soomaaliya iyo Maraykanka, waxaan ka qalin jabiyay Jaamacadda Baafolo ee Magaalada New-York…